स्क्राच देखि एक बेकरी कसरी खोल्न? के तपाईं स्क्राच देखि एक बेकरी खोल्न आवश्यक?
हाल सम्म यो कि विश्वास थियो यसको आफ्नै उत्पादन धेरै राजधानी भएको एक विशेष क्षेत्र को खण्ड मात्र ठूलो खेलाडीहरू व्यवस्था गर्न सकिन्छ। मिति, स्थिति एक व्यवसाय सुरु गर्न एक न्यूनतम लगानी गर्न अनुमति दिने, मौलिक परिवर्तन भएको छ। यस सन्दर्भमा, बेकरी उत्पादन को उत्पादन मात्र पनि सबैभन्दा payback उद्यमको एक, तर संगठनको लागि किफायती छ। अझै कसरी स्क्राच देखि एक बेकरी खोल्न बुझ्न क्रम मा, तपाईं, यो क्षेत्र केही subtleties थाहा साथै खाता प्राविधिक र कानुनी nuances मा लिनु आवश्यक छ। साक्षर गणना स्थापित उद्यम को मामला मा व्यापार कायम गर्न न्यूनतम प्रयास आवश्यकता, उच्च लाभ ल्याउनेछ।
कुनै पनि उद्योग जस्तै, व्यवसाय सुरु गर्न तपाईं सान्दर्भिक शरीर मा दर्ता पारित गर्न आवश्यक छ। तर सबै को पहिलो यो कम्पनीको कानुनी स्थिति निर्धारण गर्न आवश्यक छ। बेकरी उत्पादन को जो उत्पादन गर्न बेकरी सपा (स्वरोजगार) चयन गर्न उचित छ, तर यो रेस्टुरेन्ट गतिविधि को श्रेणी मा संलग्न अनुमति महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं वर्ग तथा खुद्रा को संभावना विस्तार भने, हामी सुरक्षित कसरी स्क्राच देखि एक क्याफे-बेकरी खोल्न बारेमा विचार गर्न सक्नुहुन्छ र बिक्रीको नेटवर्क अंक को प्रकार अनुसार भविष्यमा यसलाई विस्तार गर्न। यदि व्यापार साझेदार बिना एक व्यक्ति व्यवस्थित गरिनेछ यो सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो। तथापि, तपाईं धेरै मान्छे संग एक ठूलो उद्यम योजना भने, यो राम्रो LLC व्यवस्था छ।
कराधान को सिस्टम
यसबाहेक, कराधान को फारम को विकल्प अघि बढ्नु पर्छ। UTII रुचि गर्न सम्भव छ भने राम्रो। यो कर फारम नगरपालिका द्वारा प्रदान गरिएको छ र रूसी संघ को व्यवस्था मा लागि प्रदान सबै गतिविधिहरु लागू गर्न सकिन्छ। UTII उपलब्ध हुन सक्छ देखि छैन, तुरुन्तै कर प्रणाली सरलीकृत कराधान प्रणाली, जो एक वार्षिक कारोबार अधिक छैन 60 लाख rubles सबै कारोबार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ काम को संभावना विचार गर्नुपर्छ।
बेकरी लागि एक कोठा कसरी चयन गर्ने?
आफ्नै बेकरी, यो खुद्रा बिक्री को संभावना ध्यान केन्द्रित गर्न मनमोहक छ। खानपान प्रतिष्ठानबाट को आपूर्ति गर्न तिनीहरूले ठूलो संगठन संग प्रतिस्पर्धा गर्न रूपमा, साना उद्यम लागि लाभदायक सधैं छ भन्ने तथ्यलाई। त्यसैले यसलाई कसरी सोच्न अर्थमा बनाउँछ एक दोकान, एक बेकरी खोल्न मान्छे को अधिकतम संख्या पहुँचयोग्य ठाउँ पार मा एक शून्य छ। आदर्श, यो मेट्रो, बजार, र मनोरञ्जन र सपिङ्ग सेन्टर नजिकै एउटा कोठा हुन सक्छ। तर यो त्यस्तो सुविधा भाँडामा लागत उच्च हुनेछ मनमा सार्ने गर्नुपर्छ। तपाईं एक दीर्घकालीन काम योजना छ भने, यो अग्रिम र परिसर खरीद को संभावना मा निर्दिष्ट गर्न राम्रो छ। यस मामला मा, यो तुरुन्तै किन्न छैन आवश्यक छ। उत्तिकै महत्त्वपूर्ण एक बेकरी लागि कोठा को क्षेत्र छ। औसत निजी स्थानहरू 150-200 मिटर2हो। त्यो र उत्पादन विभाग व्यवस्थित गर्न सक्षम हुन पर्याप्त र सिधै क्याफे वा दोकान लागि क्षेत्रमा छ।
परिसर लागि SES आवश्यकताहरू
खाना उत्पादन को मुख्य जटिलता तिनीहरू उच्च माग विषय हो भन्ने तथ्यलाई मा निहित भएको Supervisory अधिकारीहरु। यो व्यवसाय प्रवेश गर्न, केही कसरी विशेष उपकरण र फर्नीचर संग एक कोठा प्रदान गरेर स्क्राच देखि एक बेकरी खोल्न थाहा छ। सुविधा सेनेटरी-epidemiological सेवाको आवश्यकताहरु अनुरूप हुनेछ भने मात्र काम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ:
एक बेकरी एक छिंडीमा अवस्थित गर्न सकिन्छ।
त्यहाँ तातो र चिसो पानी आपूर्ति हुनुपर्छ।
ढल उपस्थिति आवश्यक छ।
एक वेंटिलेशन सिस्टम हुनुपर्छ।
अवस्थित outbuildings सूची शौचालय र भण्डारण समावेश गर्नुपर्छ।
साथै, भविष्यमा सेनेटरी-epidemiological सेवा परिणाम आफ्नो निष्कर्ष बनाउने, उत्पादन प्रक्रिया को प्रमाणिकरण बनाउँछ। प्राधिकरण प्रमाणपत्रहरू पूर्ण सेट मात्र अन्त कसरी स्क्राच देखि एक बेकरी खोल्न बारेमा सबै प्रश्नहरूको समाधान गर्न अनुमति दिन्छ। यी गतिविधिहरु प्राधिकृत कागजातहरू निम्न निष्कर्ष समावेश:
जो Rospotrebnadzor मा जारी गर्न सकिन्छ उत्पादन, मा निष्कर्ष। तर, यो एक सन्तोषजनक परीक्षा परिणाम आवश्यक छ।
को निर्मित उत्पादनहरु मा निष्कर्ष। अवकास नै तरिकामा गरे।
एकरूप को प्रमाणपत्र। यो मैट्रोलोजी लागि संघीय एजेन्सी मा निरीक्षण आधारमा तयार गरिएको छ।
उत्पादन प्रक्रिया को लागि उपकरण
त्यहाँ बेकरी उत्पादन को निर्माण को लागि उत्पादन सुविधाहरु को प्राविधिक सहयोग गर्न विभिन्न दृष्टिकोण छन्। उपकरण सूची फरक हुन सक्छ, तर यदि कसरी यो कोटीमा उत्पादनहरूको को पूर्ण सीमा उत्पादन अनुमति दिने, आफ्नो बेकरी र स्क्राच देखि केक खोल्न बारेमा प्रश्न छ, तपाईं निम्न विचार गर्नुपर्छ:
आटा सानना स्थापना।
आटा काम गर्न तालिका।
पाक लागि गाडियां।
पहिलो पटक आवश्यक उपकरण द्वारा सीमित गर्न, यो प्रत्येक प्रकारको खरीद। अनुभव र बिक्री सफलता आधारित भविष्यमा, मा, यो ठूलो मात्रा मा बेकरी उत्पादन को उत्पादन को लागि केही उपकरण एकाइहरु खरिद गर्न सम्भव हुनेछ।
व्यावसायिक उद्देश्यका लागि उपकरण
प्राविधिक उपकरण को यस श्रेणी अक्सर माध्यमिक रूपमा देखिन्छ। सामान्यतया यस्तो मूल्य यो छ, कम्पनी मुख्य रूप थोक बिक्री केन्द्रित यदि छ - उदाहरणका लागि, जब अन्य पसलहरूमा र खानपान प्रतिष्ठानबाट को आपूर्ति। तथापि, कसरी खुद्रा बिक्री मा स्क्राच खम्बा एक बेकरी र केक खोल्न को मुद्दा हल गर्न निजी उद्यमीहरू को बहुमत। यस्तो अवस्थामा यो निम्न उपकरण संग व्यावसायिक परिसर प्रदान गर्न आवश्यक छ:
बेकरी र कन्फेक्शनरी लागि विशेष प्रदर्शन अवस्थामा।
नगद रजिस्टर पनि दर्ता कर आवश्यक छ जो।
पैसा र कागजातको लागि safes।
गाडियां र उत्पादनहरु सार्नका लागि मोबाइल बक्स।
जारी उत्पादन भण्डारण लागि भण्डारण रैक।
बेकरी सेवा हो संलग्न सबै कर्मियों गतिविधिको आफ्नो प्रकार अनुसार धेरै समूह विभाजित गर्न सकिन्छ। एक प्रविधि - तपाईं कुनै पनि बेकरी उत्पादन को मुख्य तथ्याङ्कले सुरु गर्नुपर्छ। उहाँले कुन उत्पादनहरु निर्धारण र उद्यम दायरा भाग हुनेछ। यो Bakers समावेश जो एक काम कर्मचारी, पछि छ। तिनीहरूको संख्या सानो स्थापना मा 4-6 मान्छे हुन सक्छ। फेरि, कसरी रिटेलर लागि स्क्राच देखि एक बेकरी खोल्न को समस्या तपाईं हल यदि आवश्यक र Waiters थियो। यो धेरै महत्वपूर्ण र लेखापाल को भूमिका छ। यो कार्य कि आउटसोर्सिंग कम्पनी संग एक सम्झौता प्रवेश सुनिश्चित गर्न ठूलो संगठन, तर एउटा सानो बेकरी मा आर्थिक तपाईंको आफ्नै लेखापाल लेना। , उपकरण कमीशन सामना जो हुनेछ यसलाई मर्मत र अन्य सम्बन्धित कार्यहरू सम्पादन गर्न सक्छ रूपमा आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी।
एक सीमा कसरी गठन गर्ने?
यो मुद्दा को स्पष्ट सजिलो भए तापनि यसलाई धेरै हदसम्म व्यापार को सफलता निर्भर गर्दछ। मार्फत दायरा खोज स्पेस सुरु गर्नु अघि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। एक विशेष मामला मा धेरै राम्रो मूल्य उत्पादन हो जो केही स्थान, उपकरण निर्भर हुनेछ र बेकरी एक सम्पूर्ण सुविधा। निस्सन्देह, यो दायरामा व्यापक, राम्रो। तर यो सम्भव सधैं छ, र विशिष्ट उत्पादनहरूमा विशेषज्ञता अक्सर पनि धेरै आय ल्याउँछ छन्। जीत-जीत अवस्था - संभावित ग्राहकहरु को आवश्यकता मा एक ध्यान। उदाहरणका लागि, यदि हामी कसरी गाउँमा स्क्राच देखि एक मिनी-बेकरी खोल्न बारेमा कुरा गर्दै छन्, दायरामा रोटी muffins, cheesecakes muffins, baguettes र केक को 2-3 प्रकार को रूप मा उत्पादनहरु को एक आधारभूत सेट समावेश हुन सक्छ।
एउटै सूची को शहर मा हामी मान्छे विशेष पाक Delights बिना चाँडै खान को लागि कहाँ महत्त्वपूर्ण छ मेट्रो क्षेत्र र बजार, मा आफूलाई सीमित राख्नु गर्न सक्नुहुन्छ। तर, यदि प्रमुख सपिङ्ग सेन्टर, पार्क र मनोरञ्जन परिसर नजिकै स्थित एक दोकान एक बेकरी, दायरामा fillings एक विस्तृत विकल्प संग केक, बिस्कुट, केक, croissants, baguettes र सधैं समावेश गर्नुपर्छ।
स्क्राच देखि एक मिनी-बेकरी कसरी खोल्न?
सुविधा मिनी-बेकरी उपकरण को न्यूनतम सेट कुन उत्पादनहरु खुद्रा बिक्री को लागि निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ, प्रयोग गरिन्छ छ। वित्तीय क्षमता सीमित छ र उत्पादन को संगठन एउटा सानो कोठामा योजना छ भने यो इष्टतम समाधान छ।
तपाईं यो ढाँचामा स्क्राच देखि एक बेकरी खोल्न आवश्यक छ कि एक प्रश्नको जवाफ मा, यो एक अपूर्ण चक्र संग उत्पादन आयोजना को सम्भाव्यता टिप्पण लायक छ। प्राविधिक सहयोग गर्न यो दृष्टिकोण तपाईं उपकरण सानना खरीद पैसा बचत गर्न अनुमति दिन्छ। साथै, तयार आटा काम को प्रक्रिया सम्भव एउटा सानो ठाउँ प्रयोग बनाउँछ जो एक ठूलो क्षेत्र, आवश्यकता छैन। आधारभूत निर्माण सञ्चालन गर्ने पाक उत्पादनहरु हुनेछ।
उत्पादन लागि कच्चा माल
यसलाई बेकरी उत्पादन को उत्पादन "आरक्षित मा" कच्चा उत्पादनहरु भण्डारण समाप्त भनेर याद लागि महत्त्वपूर्ण छ, सुरु गर्न। सोही, यो पनि समाप्त उत्पादन, यो चाँडै deteriorates र यसको वस्तु गुणस्तर हराउछ रूपमा लागू हुन्छ। सुरुमा कसरी स्क्राच देखि एक बेकरी खोल्न मा संगठनात्मक विषयहरूमा सुलझाने, यो महत्त्वपूर्ण ढिलाइ बिना कच्चा माल को जारी प्रयोग संग सटीक आपूर्ति प्रणाली विचार छ। यो ठूलो कारखानों चयन गर्न सिफारिस गरिएको छ। तसर्थ, millers आटा लागि प्रमुख घटक प्रदान गर्नेछ। पीठो साथै खमीर, चीनी, नुन, तेल र अन्य सामाग्री आवश्यक छ। स्थिरिकारी, thickeners र विभिन्न खाद्य additives को विकल्प सावधानीपूर्वक उपचार गर्नुपर्छ द्वारा - संख्या न्यूनतम हुनुपर्छ। प्राकृतिक उत्पादनहरु मा Desirably जोड। लामो अवधि मा, ग्राहकहरु उत्पादनहरु गुणस्तर मूल्यांकन हुनेछ, र यो एक राम्रो प्रतिस्पर्धी लाभ हुनेछ।
सबै कठिनाइहरूको बावजुद बेकरी र उत्पादन को संगठन मिठाई उत्पादन , व्यापार मा यो प्रवृत्ति सबैभन्दा लाभदायक को छ। यो कच्चा माल को अपेक्षाकृत कम मूल्यहरु प्रयोग र उत्पादन को यस श्रेणी जनसंख्याको बीचमा मांग मा सधैं छ भन्ने तथ्यलाई योगदान पुग्छ। तथापि, यस्तो अनुकूल सञ्चालन वातावरण एकदम स्वाभाविक तीव्र प्रतिस्पर्धा को गठन गर्न योगदान।
खेती र व्यापार रूपमा कीडे को प्रजनन। यो घर मा कीडे प्रजनन गर्न सम्भव छ?
लाभदायी खोल्नुहोस् स्टोर?
कसरी चरण पुस्तिका द्वारा स्क्राच चरण देखि burgernuyu खोल्न
विचार, विकल्प र घर व्यापार को लाभ: पुरुषहरु को लागि घर व्यापार
विनिर्माण व्यापार: विचार, उदाहरणहरू
Haya bint अल Hussein - संयुक्त अरब एमिरेट्स को प्रधानमन्त्री को पत्नी
को एडी को Bursitis र उपचार को मूल कुराहरू
आंशिक शक्ति वा कसरी खान चाहन्छ गर्नेहरूका लागि वजन गर्न
गर्भावस्था मा घाँटी: लक्षण, उपचार र नतिजा
सीलेंट "Izhora बीपी-G35" - गुणहरू, विशेष गरी आवेदन
तिनीहरूले पैसा थियो भनेर के, फेंग शुई को पर्स हुनुपर्छ?